Beesha Caalamka oo walaac ka muujisay Sharciga Galmada ee la horgeeyay Golaha Shacabka - Jowhar Somali news Leader
Home News Beesha Caalamka oo walaac ka muujisay Sharciga Galmada ee la horgeeyay Golaha...
Beesha Caalamka oo walaac ka muujisay Sharciga Galmada ee la horgeeyay Golaha Shacabka
Qaramada Midoobay iyo Beesha Caalamka ayaa walaac ka muujiyay Sharciga Galmada oo maanta la horgeeyay Golaha Shacabka, kaasoo dib loo celiyay.
Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya oo ka jawaabay xeerkaan ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin isku dayga miiska Guddoomiye Mursal u saaray Xeerkaan ku saabsan Galmada oo uu ku tilmaamay mid cusub.
“Qaramada Midoobay iyo saaxiibadeeda kale ee Soomaaliya ayaa u muujiyey walaaca ay ka qabaan Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, isku dayga miiska lagu soo saaray sharci cusub oo aan sax aheyn, kaas oo oggolaanaya guurka carruurta, kana hor imaanaya heshiisyada caalamiga ah ee arrintan la xiriira” ayaa lagu yiri qoraalka Xafiiska QM.
Qoraalka ayaa intaa lagu daray “Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxa uu ku boorrinayaa golaha wasiirrada ee dalka in ay dib-u-soo-celiyaan Hindise-sharciyeedka Dembiyada Galmada ee asalka ah”.
Xildhibaanada waxa ay ku doodeen in Xeerkaan uu kahor imaanayo Shareecada Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliya, sidaas awgeed waxa ay dalbadeen in dib loo celiyo, maadaama dastuurka dalka uu dhigayo in wax waliba oo kahor imaanaya Diinta aan Xeer noqon Karin.
Guddoomiye ku xigeenka 2-aad ee Golaha Shacabka BJFS Xildhibaan Mahad Cabdalla Cawad waxa uu Golaha kahor sheegay in la hagaajinayo Cinwaanka Xeerka, qodobada cabashada laga qabayo iyo hab diyaarintiisaba.